Ajụjụ | Cangzhou Kuntai Ngwaọrụ Ngwaọrụ Production Co., Ltd.
Maka nlele, oge ndu bụ ihe dịka ụbọchị asaa. Maka usoro mmepụta, oge a na-eduzi bụ ụbọchị iri na ise ruo iri ise na ise ka anachara nkwụnye ego a. Oge mbu ga-adị mma ma (1) anyị enwetara nkwụnye ego gị, yana (2) anyị nwere nkwenye ikpeazụ gị maka ngwaahịa gị. Ọ bụrụ na oge ndị ọrụ anyị anaghị arụ ọrụ na usoro iheomume gị, biko jiri ire gị na-ere ihe ị chọrọ. N'okwu niile anyị ga-anwa ịnabata mkpa gị. N'ọnọdụ ka ukwuu, anyị na-enwe ike ime ya.
Nwere ike ịkwụ ụgwọ na akaụntụ akụ anyị
N'ozuzu anyị na-anabata nkwụnye T / T 30% tupu oge eruo, 70% T / T nguzozi tupu mbupu.
Ma ọ bụ L / C n'anya.
Ndi ozo ugwo okwu bu ndi ozo.
Ee, anyị na-eji nkwakọ ngwaahịa mbupu elu dị elu, dịka pallets ọkọlọtọ ma ọ bụ ikpe. Nkwakọ ngwaahịa ọkachamara na nke anaghị eburu ọkọlọtọ chọrọ ma enwere ike ị nweta ụgwọ ọzọ.
Nweta ngwaahịa echekwabara